जितुसंग भेट हुँदा रोइन् दीपा, जुन भाईले ‘कोही नहुँदा म छु है भन्थ्यो! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > जितुसंग भेट हुँदा रोइन् दीपा, जुन भाईले ‘कोही नहुँदा म छु है भन्थ्यो! (भिडियो हेर्नुस्)
जितुसंग भेट हुँदा रोइन् दीपा, जुन भाईले ‘कोही नहुँदा म छु है भन्थ्यो! (भिडियो हेर्नुस्)
admin November 11, 2020 November 11, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन	0
मुन्द्रेको कमेडी क्लववाट वाहिरिएपछि दीपा श्री निरौला र जितु नेपाल पहिलो पटक संगै देखिएका छन् । दीपा कार्यक्रमको अध्यक्षतावाट वाहिरिएपछि जितुलाई पनि उनीहरुको टिम छक्का पञ्जा ६ वाट पनि निकालिएको भन्ने चर्चा चलेको थियो । दीपालाई अचानक कार्यक्रमवाट निकालिएको भन्दै दिपकराज गिरीले पनि टिप्पणी गरेका थिए । दीपाश्रीले महानायक राजेश हमालका बारेमा दिएको अभिब्यक्तिका कारण विवादित भएपछि उनलाई मुन्द्रेको कमेडि क्लबको अध्यक्षतावाट निकालिएको अनुमान गरिएको थियो ।
मिडियामा आएका धेरै कुराहरुका बारेमा उनीहरुले संगै प्रतिकृया दिएका छन् । दीपाले आफ्नो चित्त दुखेको भने बताएकी छन् । कोही नहुँदा दिदी म छु है भनेर भन्ने भाईहरुकै कारण अहिले चित्त दुखेको बताएकी छन् । दाई मानेको पत्रकार प्रकाश सुवेदीकै कारण महानायक हमालका कारण विवादित भएका कारण उनले प्रकाशको पनि नाम लिएकी छन् । प्रकाशजीसंग पनि पारिवारिक सम्बन्ध छ तर खै कस्तो पारिवारिक सम्बन्ध भयो ? उनले भनिन् ।
दीपा मिडियामा विवादित भइरहँदा उनको परिवारमा पनि समस्या परेको थियो । दीपाको बुवा र आमालाई कोरोना पुष्टि भएपछि उनी पारिवारीक रुपमा समस्यामा परेकी थिइन् । जितुले दीपालाई कार्यक्रमवाट वाहिरिनु परेकोमा जितुले आफ्नो पनि कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।
अघिल्लो दिन सम्म तपाइ विना म कार्यक्रम नै गर्दिन भनेर जितुले भनेका कारण आफु कार्यक्रममा जानका लागि पोशाक समेत खोजेर तयार भएर बसेकै बेलामा अचानक फोन आएर अब तपाई आउनु पर्दैन भनेपछि निकै चित्त दुखेको बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, म निकै समस्यामा परेकै बेलामा आफुले भाई मानेकै जितुले अचानक फोन गरेर दिदी यति धेरै लामो समय सम्म सहयोग गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद भनेर भाईले भन्दा मलाई निकै चित्त दुख्यो, उनले आँखा भरी आँशु पार्दै भनिन् । उनी यति भन्दा दीपा निकै भावुक भएकी थिइन् । जुन भाईले मलाई मेरो घरमा एउटा कोठा तपाईका लागि छ है भन्थ्यो त्यही भाईले यस्तो भन्दा मलाई निकै चित्त दुख्यो उनको भनाई थियो ।
चावाहिल चोकमा माछा बेच्दै भेटिए शिशिर भण्डारी, यी युवतीसँग बस्यो प्रेम (भिडियो हेर्नुस्)
चर्चित सेलिब्रेटी रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै
”बिचरा सन्तोष दाई” भन्दै धरधरी रोए पुण्य ! अरबमा कमाएको सबै पैसाको मोल प्रमिलाले तिर्नुपर्छ (भिडियो हेर्नुस्)
कपनमा कार्टुनमा भेटिएकि बच्चीकाे वास्तविक आमा फेला परिन्, उद्दारका यस्तो नाटक गरेपछि पुष्पाले मागिन् माफी (भिडियो हेर्नुस्)